अर्थतन्त्र Archives - jagritikhabar.com
फेरी बढ्यो सुनको मूल्य ! तोलाको कति पुग्यो ?
२ असार, काठमाडौं । सुनको मूल्य तोलामा ८०० रुपैयाँले बढेको छ । बुधबारको तुलनामा बिहीबार तोला ८०० रुपैयाँले बढेर ९७ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार बुधबार प्रतितोला ९६ हजार ५०० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।...
मलेसियन रिंग्गेट एकको खरिदमा कति ?
३० जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आज सोमबार पनि अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहेको छ । आइतबार स्थिर रहेको अमेरिकी डलर आज पनि सोही मूल्यमा खरिदबिक्री गर्न सकिनेछ । आज सोमबार एकको खरिदमा १२४ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीमा १२४ रुपैयाँ ८४...
२७ जेठ, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । आज राती देखी १२ बजेदेखि लागू हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको निगमले जनाएको छ । निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ र डिजेल, मट्टितेलमा १२र१२ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको हो । खाना...
नेपालमा अब कारको मूल्य मात्र ४ लाख २० हजार ?
२० जेठ, काठमाडौं । अटो होस्ट प्रालिले नयाँ मोडेलको इलेक्ट्रिक कार डेरी एम ७ नेपालमा ल्याएको छ । कम्पनीले डेरी ब्राण्डको इलेक्ट्रिक कार नेपाली बजारमा ल्याएको हो ।अटो होस्टले नयाँ परिमार्जन सहित आएको डेरी एम ७ को मूल्य नेपाली बजारमा २१ लाख रुपैयाँ कायम...
युवराज खतिवडाले गरेको गल्ती सच्याएपछि घट्यो पेट्रोल डिजेलको भाउ !
२० जेठ, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मटितेलको भाउ घटाएको छ । बिहीबार बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँले घटाउने निर्णय गरेको हो । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७०...
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यति घट्ने !
१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा बोल्दै कर घटाउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको बताएका हुन् । पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार र भन्सार शुल्क घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक...
बजेटले बढायाे २०० सीसी माथिका मोटरसाइकलको कर
१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले २०० सीसी भन्दामाथिका मोटरसाइकलमा भारी दरमा कर बढाएको छ । सरकारले २०० देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क २० प्रतिशतले बढाएको छ । यो रेन्जमा यसअघि ६० प्रतिशत रहेको अन्तशुल्क ८० प्रतिशत बनाइएको छ । यो समूहका बाइकमा यसअघि ३०...
१४ जेठ, काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ५.८४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो विस्तार ४.२५ प्रतिशत थियो । सरकारले आज संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ का अनुसार कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव क्रमशः न्यून हुँदै गएको तथा...
२३ वैशाख, काठमाडौं । लगातार घटेको सुन-चाँदीको मूल्य आज बढेको छ। बिहीबार सुन प्रतितोला ९८ हजार ६ सय रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै, चाँदीको मूल्य प्रतितोला १३ सय पाँच रूपैयाँ पुगेको छ।सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिन सुन प्रतितोला ९७ हजार दुई सय रुपैयाँ...
२२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १६ पैसाले घटेर १२१ रूपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १२२ रूपैयाँ ५७ पैसा पुगेको छ। अघिल्लो दिन अमेरिकी डलर एकको खरिददर १२२ रूपैयाँ १३ पैसा र...